Muwaadin lagu xabisey dalka Bulgaariya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Muwaadin lagu xabisey dalka Bulgaariya
La daabacay torsdag 20 juni 2013 kl 18.30
Muwaadin haysta dhalshada waddammada Iswiidhen iyo Turkiya, hase yeeshee ka soo jeeda asal ahaan qowmiyadda Kurdida ayaa horraantii toddobaadkan lagu qabtey kolkii ay caga-dhigatay dayuurraddii uu saarnaa garoonka dayuurradaha ee Varna oo ku yaala dalka Bulgaariya. Iyada oo sida reerkiisu sheegeen uu halkaasi u tagey fasax. Ninkan oo da'diisu tahay kontameeyo ayaa horay uu dalka turkigu baadi-goob ugu jiray, la xiriiray dhaqdhaqaaqyadiisii siyaasadeed.
Hase yeeshee ku dhaqnaa dalkan Iswiidhen laga soo bilaabo bartamihii siddeetameeyadii.
Qaraabada ninkan ayaa iminka ka cabsi qaba in gacanta loo geliyo dalka Turkiga gabagabada toddobaadkan eynu ku guda jirno. Joakim Edcardsson Reimar, wuxuu ka howl-gala laanta saxaafadda ee wasaaradda arrimmaha dibadda:
- Midda aan la soconno ayaa ah in dalka Bulgaariya xoriyaddiisa lagaga xayuubiyey nin kontameeyo sano jir ah kuna dhaqan nawaaxiga bartamaha Iswiidhen. Qunsulka u fadhiya Iswiidhen Varna ayaa kor socod ku haya xaaladda ninkaa iyadoona loo qabtay qooyskiisa gar-yaqaan. Illaa hadda kama war-heyno in gacanta loo gelin doono dalka Turkiga iyo in kale. Qunsulka oo 19-kii bishan booqasho ugu taga yxarunta lagu hayo ninkan ayaa sheegay in xaaladdiisu wanaag-san tahay.
Lama soconno wax intaa dhaafsiisan, sida uu sheegay Joakim Edcardsson Reimar oo ka howl-gala wasaaradda arrimmaha dibadda. Isagoona intaa raaciyay inay caqabad hor-seedi karto dhalashooyinka kala duwan ee la haysto, hase yeeshee aannu doonayn inuu wax sii saadaaliyo:
- Weli waan ka war dhoowreynaa sidii aan ka yeeli laheyn, sida uu sheegay Joakim Edcardsson Reimar mar uu u waramayay idaacadda Iswiidhen ee caalamiga ah.